ब्लुटुथ खुल्लै छोड्दा के हुन्छ ? जानिराख्नुहोस | Esajhakura
गृह पृष्‍ठ खबर ब्लुटुथ खुल्लै छोड्दा के हुन्छ ? जानिराख्नुहोस
ब्लुटुथ खुल्लै छोड्दा के हुन्छ ? जानिराख्नुहोस
प्रकाशित मिति : २०७७ मंसिर ६ , शनिबार ११:०७
मंसिर ६ काठमाडौं ।
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम गोप्य र सुरक्षित छैन भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यो एकदमै कस्टमाइज्ड प्लेटफर्म भएको कारण धेरै मोबाइल प्रयोगकर्ताले अझै यसलाई मन पराउँछन् । गुगल डेभलपमेन्ट टिमले समय समयमा सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि काम गर्दै अइरहेको छ । यद्यपि समयसमयमा यसको साइटमा विभिन्न कमजोरीहरु भने देखा पर्दै आएका छन् ।
केही समयअघिको एउटा रिपोर्टमा एन्ड्रोइडको सहायक सिस्टम गम्भीर रुपले कमजोर रहेको कुरा उल्लेख थियो । तर प्रयोगकर्ताका लागि सुखद खबर के छ भने यो समस्यालाई सेक्युरिटी प्याचबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो संमवेदनशीलता अर्थात जोखिमबाट बच्न एन्ड्रोइड एट र एन्ड्रोइड नाइनका लागि फेब्रुअरी २०२० मा सेक्युरिटी प्याच प्रयोग गर्न सुभाव दिइएको थियो । यसअलावा डिभाइसलाई सुरक्षा दिन अन्य सुरक्षा उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । त्यसको उत्कृष्ट उपाय भनेको फोन वा ट्याबलेटलाई नन डिसकभरेबल बनाउनु हो ।
पछील्लो पोस्ट फोटो खिच्नुभयो ? अब ब्याकग्राउन्ड हटाउनुहोस सजिलो सँग
अगिल्लो पोस्ट हिरोलाई मन नपर्दा डबिङमै डाइलग परिवर्तन गर्न लगाइयो
हेटौडामा बनाइयो देशकै दोस्रो ठूलो बुद्ध मूर्ति